टिकट बिक्री गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ – कांग्रेस महासमिति सदस्य अर्याल « Bikas Times
टिकट बिक्री गर्नेलाई कारवाही हुनुपर्छ – कांग्रेस महासमिति सदस्य अर्याल
काठमाडौं – नेपाली समाजले वि.स २००७ सालको जनक्रान्ति मार्फत खोजेको परिवर्तन आज पनि खोज्दै छ । स्वतन्त्र , समानता र भातृत्वको खोजी आज पनि जारी छ, यसैको खोजीमा निरन्तर लागिरहनुभएका नेपाली काँग्रेसका महासमिति सदस्य भोजराज अर्यालसँग सहकर्मी अमृत अर्यालले गरेको कुराकानी
१. भोजराज जी आराम हुनुहुन्छ ? आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
आराम छु भनौ । एउटा राजनितीक सामाजिक क्षेत्रमा समर्पित कार्यकर्ता को लागी आफ्नो भौतिक शरीरको स्वस्थ्य भन्दा उसले अंगीकार गरेको पार्टीको सफलता असफलता वढी महत्वपुर्ण हुने रहेछ भन्ने महसुस गर्दैै आएको छु । मलाई अहिले नेपाली काँग्रेस जुन संकट वाट गुज्रीएको छ त्यसले पिडा वोध गराई रहेको छ । जहाँ सम्म मेरो व्यस्तताको प्रसंग छ ।
साथीभाईहरु संग भेटघाट, साथी भाईका समस्या छन् भने तिनको समाधान खोज्ने त्यस तर्फ लाग्नेमा व्यस्त छु । पहिलाको भन्दा पछिल्लो समय देशमा देखिएको राजनीति अब भगवानहरुको कृपाले शासन सत्तामा बस्नेहरुले त्यती ठुलो गलत गरेनन् भने अब राजनीतिक आन्दोलन समाप्त हुनु पर्छ र अबको समय भनेको आर्थिक क्रान्ति तिर सबैको ध्यान जान आवश्यक छ । म पनि बचेको समय कृषि क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेको छु । जस बाट सामाजीक परिवेशमा हामीले फेरी एउटा उदाहरण वनेर देखाउन सक्नु पर्छ । अबको मेरो कदम त्यसै दिशा तर्फ लम्कीने छन् ।
२. नेपाली काँग्रेसमा निष्ठाको राजनीति अन्त्य भएको हो ? महामानव विपी कोइरालाले प्रजातन्त्र स्थापनापछी सुकिला—मुकिला हावी हुनेछन् भन्नुभएको थियो, तिनै सुकिला मुकिला हावी भएर काँग्रेसले पराजय व्यहोर्नु प¥यो भन्नेहरु छन् नी ?
अहिले वडो विचित्रको अवस्था वाट गुज्रिएको छ नेपाली काँग्रेस, गुटगत राजनीति गाँउतह देखी केन्द्रीय तह सम्म गुटवन्दी चरम उत्सर्गमा पुगेको छ । आफुले सकेका ठाँउ योग्यता क्षमता , त्याग वलिदान इमान्दारीताको कुनै मतलव छैन । अहिलेको पार्टीमा व्यापारी करण, ठेकेदारी करण भष्ट्रीकरण, दलाली करणमा वदलीएको छ, साच्चै भन्दा इमान्दारीता , निष्ठा अहिले मुर्छित अवस्थामा छ ।
वि.पि ले भने जस्तै पार्टी भित्र सुकिला मुकिला को रुपमा भष्ट्राचार गरेर अकुत सम्पति कमाएका राजनीतिकोे आडमा ठेक्का, पट्टा हत्याएर अकुत सम्पति कमाएका जग्गा दलाली गरेका वा कुनै न कुनै रुपमा २ नंम्वरी धन्दामा लाग्ने भएकाहरुको हाली मुहाली हुदै आएको छ । पैसा भए टिकट घरमै छोड्न आउछन् अहिले नेता हरु । यो सबै कर्महरुको प्रयोगको थलो पार्टीहरु बनेका छन् साथै नेपाली काँग्रेस पनि यसैको शिकार भएको छ भने पुराना कार्यकर्ता पाखा लगाइएको छ । पार्टीमा त्यसका विरुद्ध नयाँ पुराना सबै निष्ठावान कार्यकर्ताहरु फेरी उत्रन ढिलो भई सकेको छ ।
३. तिन—तिन कार्यकाल स्याङ्जाको पार्टी सभापति पद सम्हाल्नु भएका काँग्रेस सभापति कमल पंगेनीको अकल्पनीय मृत्यू पश्चात यतिबेला स्याङ्जा काँग्रेस का.वा. सभापतिको भरमा चलेको छ, अबको निकास के हुन्छ होला ?
बडो दुखद घटना व्यहोर्नु प¥यो स्याङजा काँग्रेसले । चतुर राजनीतिक खेलाडीको रुप उदाउदै गरेको पार्टी सभापतीको आकस्मिक निधनले स्याङजामा एउटा राजनीति रिक्तता उत्पन्न भएको छ । ७/८ महिना विती सक्दा पनि केन्द्रले विद्यान बमोजिम पद पुर्तिको अनुमति नदिएर एउटा तदर्थवादी प्रक्रिया त्यो पनि एउटा गुटको झुन्डले सचिव लाई का.वा. सभापति भइस भनेर आत्मरतिमा रमाई रहेको संगठन तहस नहस छ । त्यसको कसैलाई मतलव छैन पार्टी कब्जा गर्ने दिवा स्वप्न देखिरहेका छन् । जहाँ सम्म यसको निकाशको प्रश्न छ विद्यानले व्यवस्था गरे अनुसार रिक्त भएको ६ महिना भित्र निर्वाचन प्रक्रियाद्धारा पद पुर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार गर्नु विकल्प अन्य केही हुन सक्दैन ।
४. तपाईको सक्रिय राजनीतिमा कति बर्ष विते ? अबको राजनीतिक उपस्थिती कुन पदमा हुन्छ होला ?
म १३ –१४ वर्षको उमेर देखी नेपाली कांग्रेस मा लागेका २६–२७ साल तिर स्याङ्जामा ने.वि संघको गठन गर्ने काम गरियो । प्रथम अधिवेशनबाट केन्द्रीय महाधिवेसनका लागि स्याङजाको प्रतिनिधित्व गरेको थिए । निधीलाई ने.वि संघको सभापति वि.पीको निर्देशनमा हामीले वनाएको हो, उनको विद्यार्थीमा राजनीतिमा खासै राम्रो थिएन । २०३१ साल देखी पार्टीको क्रियासिल सदस्य बनेपछि स्थानिय कमिटी प्रमुख, क्षेत्रीय सचिव जिल्ला सचिव २ पटक आठौ महाधिवेशन देखी लगातार ६ पटक पार्टीको महाधिवेशन मा सहभागी हुदै आएको छु । यसरी हेर्दा काग्रेसमा ४६–४७ वर्ष सक्रिय रुपमा जेलनेल यातना सहदै विताए । ०३६ को विद्यार्थी आन्दोलनमा मेरो राज्यले टाउकाको मुल्य पनि तोक्यो ।
जीवित वा मरेको ल्याउने लाई ५० हजार इनाम दिने भनेर यि र यस्ता धेरै काल खण्ड पार गर्दै पार्टी लाई परिवार भन्दा वढि महत्व का साथ लागियो । अबको मेरो उपस्थिीती भनेको पार्टीलाई यसका उत्पादन केन्द्र (ग्रासरुट) देखी शुद्धीकरण गर्दै काँग्रेसलाई पुरानै विरासतमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ । अहिलेकै तवर अनुसार काँग्रेस पार्टीलाई अगाडी बढाउन खोजियो भने अमुल वढि कठिनाईहरु आउन सक्छन ।
अहिले काँग्रेसका हरेक पाट पुर्जाहरुमा खिया लागेको छ । यत्रो गौरव पुर्ण इतिहास भएको मुलुकको जेठो प्रजातान्त्रिक पार्टी प्रती अहिले पनि जनता आसापुर्ण नजरले हेरी रहेको छन् । समयमै त्यो संकेत बुझ्न सकेन र अब पनि यिनै वासी खिया लागेको असक्षम नेतृत्व रहिरयो भने न मेरो उपस्थिती होला न काँग्रेसकै अवसर आउला । त्यसैले गुटगतको अन्त्य गरेर काँग्रेस समयमै सचिनुको विकल्प छैन ।
५. नेपाली काँग्रेसका नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ताहरु प्रति इमान्दार हुन छाडे भन्ने गुनासो छ नी, तपाई के भन्नुहुन्छ ? कार्यकर्ताहरुलाई के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?
युद्धको मैदानमा सिपाहीको भन्दा कमाण्डरको कौशलताको महत्व हुन्छ । समय गति लाई बुझेर ठिक ठिक रणनितिहरु अख्तीयार गर्न नसके हार भन्दा शिवाय अरु केही हुदैन । हाम्रो दल रुपी फौजको कमाण्डर विबेकशिल, स्वार्थि र भावना बुझ्ने खालको हुनुपर्छ । त्यस्तो दुषित ,पुर्वग्राही , लोभी पापी ग्रन्थी व्याक्तिहरुको घेरामा पार्टी नेतृत्व रहे सम्म कार्यकर्ता प्रति इमान्दार हुने कुरै भएन ।
तर त्यसो भनेर हात खुट्टा गलाएर बस्यौ भने कहिल्यै न्याय पाईदैन । त्यसैले वि.पी कोइरालाले भने जस्तै दुषित तत्व लाई परास्त गर्न कार्यकर्ता तयार भयो भने तिनीहरु पनि कि बदलिन्छ कि जान्छन् ।
६. तपाई आफुलाई चाहिँ कसरी मुल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ? तपाई कस्तो नेता नरम वा कडा ?
अरु धेरै कुरामा आफ्नो मुल्याङकन आफैले गर्नेकुरै भएन, साथी भाई र तपाईहरुले नै मुल्याङ्कन गर्ने हो । एउटा कुरो चाही मलाई झुटमुट र अन्याय सहन गर्न गाह्रो पर्छ । त्यसैले मेरो मुल्याङ्कनको जिम्मेवारी यहाँहरुलाई नै दिन चाहान्छु ।
७. राजनीतिमा लागेर तपाईले केही गुमाउनु पनि भयो कि ?
मेरो परिवारमा मेरो दाजु भाईहरु मेरो उच्चस्तरको जीवन जिउछन् । म पनि व्याक्तिगत आवश्यकता परिपुर्तीमा लागेको भए वढि सुविधाका साथ जीवन जिउथे होला तर मलाई त्यसमा कुनै पश्चताप छैन किन कि मैले पनि नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दुई थोपा रगत दान गर्न पाएको महसुस गर्छु । गुमेको चिजको कुनै पश्चाताप छैन ।
८. तपाई त काँग्रेस भित्रै गुट—उपगुटको राजनीति गरेको अनि आफ्नै पार्टीका उमेदवारलाई पराजय गराउन लागि परेको आरोप छ नी ? यही आरोपका आधारमा तपाईलाई कारवाहिको सिफारीस पनि सुनिन्छ । वास्तविकता के हो ?
मेरो कुनै स्वार्थी गुट छैन । म इस्युको आधारमा समर्थन या विरोध गर्ने प्रवृतिको मानिस हु । पार्टी बिभाजनको समयमा म निसंकोच पार्टी मुलधारमा सक्रिय रहे । वि.पि कोइरालाको विचारवाट प्रभावित भएर नेपाली काँग्रेसमा लागेको व्याक्ति हुँ म । उहाँले प्रतिपादन गरेको प्रजातान्त्रीक समाजवाद लाई मुलयन्त्र मानेर त्यसकै कार्यन्वयनका लागि लामो समय संघर्स अनि संगठनमा लागियो । समाजवाद ल्याउन क्रियाशिल रहियो । ०४६ को आन्दोलन पछि पार्टी पटक –पटक सत्तामा पुग्यो तव तव पार्टीमा विभिन्न खोले मानिस को प्रवेश हुन थाल्यो । नाङ्गोलोमा ककड बेच्ने व्यापारी देशकै धनाढ्यमा गणना हुन थाले । उनिले नै पार्टी भित्र व्यापारी, भ्रष्टाचारी, ठेकेदार , दलाल, वाहुवलि आदीलाई पार्टीको उपल्लो तह सम्म पु¥यायो ।
अहिले पार्टीलाई उनिहरु नै कब्जा गरेर चलाएका छन् । म यस्ता प्रवृति प्रती अलि सकारात्मक हुन नसक्दा त्यस्ता तत्वको दृष्टीको तारो वनिदो रहेछ । निष्ठा र इमान्दारीतालाई जीवनको मुल सम्पती मानेर हिड्दा पक्कै त्यसका पक्षघरहरु मेरो पक्षमा होलान त्यो गुटगत राजनीतिका लागी तयार पारेका जथ्था हुन सक्दैन । जहाँ सम्म निर्वाचनमा सहयोग नगरेको आरोप छ । मलाई गोपालमान जीले घरमा बोलाएर टिकट लिने भए पैसाको जोहो गर्न भन्नु भयो । करिब ५० वर्ष काम गरेको पार्टीमा टिकट किन्नु अवस्था आएको देख्दा मलाई खिन्नता लाग्यो ।
पैसाले टिकट किनेर लिनुपर्छ भने लिन्न पैसा नदिईकन टिकट लिने हो भने म जनताको घरआगनमा जान तयार छु भनेर गोपालमानजीलाई भने । पैसानै नहुने भए पछि सल्लाह गरौला भन्ने करा भयो । पछि टिकट मलाई नदिएर अरु मित्रहरुलाई दिईएछ । यसबाट टिकट बिक्रि भयो भन्ने कुरा बुझियो । पार्टीमा अन्य पनि सिनियर साथिहरु थिए, त्यसको पनि वास्ता गरिएन । वैचारिक हिसाबले बनेका बिचार समुहलाई समेटिएन । पार्टी बिभाजनको बेला प्रजातान्त्रिक पक्षधरहरुलाई सबै तहहरु टिकट दिइयो साथै जनताको बिचमा राम्रो छवि नवनाएका व्याक्तिलाई टिकट दिएका कारण निर्वाचनमा देशभरी काँग्रेसको अवस्था अत्यन्त कमजोर र लज्जा जनक पराजय बेहोर्न प¥यो ।
चुनावमा जिल्ला, क्षेत्र, नगर र गाँउतहका नेतृत्वमा बसेका साथीहरुको भुमिका राम्रो देखिएन । एक खाले काँग्रेसलाई पुरै पाखा लगाएर चुनावी मैदानमा उमेदवार लाग्नु भो । निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि हामीलाई असहयोग गरेको आरोप लगाइएको हो । गोपालमान जीले नै पार्टी सभापति बनाउन भुमिका खेलेका तत्कालिन स्वर्गिय पाटी सभापति कमल पंगेनीलाई हराउन गोपालमान जी आफै लागेको पंगेनीजीले मलाई भेटमा विस्तार गर्नुभएको थियो । पंगेनी हराउन आफ्ना अत्यन्त नजिकका मानिस द्धारा सामदाम प्रयोग गरेर निर्वाचन जित्ने सुनिश्चित भएको स्याङजा १ को प्रदेश (क) का उमेदवार कमल पंगेनीलाई हराएको व्यहोरा मृत्यु पुर्व पटक पटक म सगँ गुनासो गर्नुभएको थियो । नेताले तल्लो स्तरको गुरटवन्दी र प्रलोभनमा परि टिकट वितरण गरेका कारण स्याङजामा काँग्रेसको पराजय भएको व्यहोरा जगजाँहेर छ ।
लगभग आधा सताब्दी जेल, नेल , यातना संघर्ष गरेको आफ्नो पार्र्टीको जिम्मेवार तहमा बसेको मानिसबाट टिकट लिन पैसा दिनु पर्ने अवस्था आएपछि त्यस्ता मानिसको पछाडी लागेर यि मानिस चरित्रवान हुन भनेर जनता माझ जान लाज लागेर निष्क्रीय बसेको चाहि सत्य हो । मेरो पनि रगत र पसिना ले वनेको पार्टीलाई असयोग गर्ने कुरै आउदैन । जनताले तिरस्कार गरे पछि लाज पचाउन हामी लाई कारवाही को नाटक गरेको हो । कार्वाही नै गर्ने हो भने टिकट बेच्ने लाई गरिनु पर्छ सगै चुनाव लडेको साथिलाई हराउने लाई कार्यवाही हुनु पर्छ । पार्टीले कारवाहिको सिफारी गरेको भन्ने सुनेको हो । वडातह, नगर, क्षेत्र र जिल्लातहमा समिक्षा र छलफलपछि सिफारी गरेको भए राम्रो हुने थियो ।
पराजय भोगेका उमेदवारहरुको निवेदनका आधारमा सिफारीस गरिएको हो भन्ने थाहा पाएको छु । भोजराज अर्यालले कसैलाई भोट नहाल भनेको प्रमाण पेश गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । अझ देश भरी काँग्रेस लाई पराजित दिलाउने सिमित गुटको आधार पार्टी कब्जा गर्ने काँग्रेसमा सैद्धान्तिक विचलन ल्याउने नेतृत्व र तिनका गुटलाई कार्यवाहि गरी इमान्दार स्वच्छ छवि भएका नयाँ पुस्ता लाई पार्टीको नेतृत्व हस्तान्तरण गरिएन भने इतिहासको गर्तमा खोज्नु पर्ने छ पार्टीलाई ।
९. तपाई वालिङ गाविसको अध्यक्ष । एंव पछि मेयर हुँदा तपाईको नेतृत्वमा त्यस क्षेत्रमा भएका विकास निर्माण र अन्य सफलताहरु के के हुन् ?
२०४६ सालको परिवर्तन पछि हामीमा दोहोरो जिम्मेवारी आएको थियौ । एउटा पार्टी को संगठन लाई जनस्तर सम्म पु¥याउने अर्को विकाश निर्माणको कार्यलाई अगाडी बढाउने । २०४६ वैशाखमा गठन भएको आदरणिय संस्थापक नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराईको नेतृत्व को अन्तरिम सरकार अत्यन्त छोटो र जटिलता विचमा तोकेकै समयमा संविधान निर्माण गरि राजनीतिक पार्टीहरुमा एक प्रकारको उत्साह प्रदान गरेको थियो । २०४८ साल वैशाख मा आम निर्वाचन पछि नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो ।
२०४९ मा नयाँ संरचना मा स्थानिय निर्वाचन भयो । उक्त निर्वाचनमा वालिङ गा.वि.स अध्यक्षमा निर्वाचित भईसके पछि सिमित साधन स्रोतका वावजुद अथक प्रयास गरी वालिङलाई नमुना गा.वि.स वनाउन सफल भएको जस्तो लाग्छ । सन्तुलित ढंगबाट विकास निर्माणका कार्यहरु स्कुल नभएका वार्डहरु स्कुल खोल्ने देखि नदी नालाहरुमा पुल सिंचाइका लागि कुलो, खाने पानी बाटो घाटो ,पिछडिएका वर्गको संरक्षण तथा उत्थानका कार्यक्रमहरु संचालन गरिए र यस वालिङ गा.वि.स लाई नगरपालिका बनाउने जस्ता प्रमुख कार्यहरु त्यस समयमा गरिए । २०५४ सालमा भएको स्थानिय निकायको निर्वाचनमा मलाई वालिङ नगरपालिकाको नगर प्रमुख बन्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यस बखत सिमित साधन श्रोत बाट हामीले निम्न कार्यहरु गरेका थियौ ।
क) पहिलो वर्ष खानेपानीलाई पहिलो प्राथामिकता मा राखेर कार्य ग¥यौ ।
ख) तिनवटा गा.वि.स मिलेर वनेको न.पा का ११ वटै वडामा मोटर बाटो पु¥यायौ । यसै क्रम खुले बाटोहरु मिर्दि भिमाद, त्रियासी, रत्ने ,सिमलचौतारी , माझकोट , ढावखोला , वोगटीडाडा देखि चिथाभञ्याङ ,सुर्कौदी ,पेखु देउराली आदी धेरै अहिले पनि धेरै महत्व राख्ने बाटोहरु खन्यौ ।
घ) गरीब जेहन्दार विद्यार्थीलाई विद्यालय जान प्रेरित गर्दै किताब कापी स्कुल ड्रेस
ङ ) दलीत छात्र छात्रालाई पढ्न प्रेरित गर्ने कार्य
च) वालिङ बजार साघुरो चोकलाई जैसी पधेरा देखी केदारनाथ मन्दीर सम्म सडक बिस्तार न.पा बजेट खर्चेर होइन
छ) खरीबोट भिमटारी ढावखोला हुदै डुम्रिकोट सम्म रिङ रोड निर्माण त्यसै स्थान पार्टी द्धारा महामानव वि.पि को सालिक निर्माण गरि वि.पि चोक नामाकरण
ज) न.पा कार्यालय भएको भवन भएको प्रगतीजग्गा खरिद जुन अहिले न.पाको प्रगति देखिने माध्यम बनेको छ । भवन पनि त्यती बेलै निर्माण गर्ने योजनालाई नेपालमा भएको हिंसात्मक द्धन्दले प्रभावित पा¥यो । एक घर पनि नछोडी ११ वटै वाडमा विद्युतिकरण जुन अहिले जस्तो सजिलो थिएन ।
झ) विद्यालयहरु लाई सवलिकरण गर्दै नभएको वाडमा विद्यालय खोल्ने कार्य
ञ) कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने त्रियासीमा संकलन केन्द्र स्थापना किसानलाई मल बिउ, स्प्रेयर बाख्रा ,बंगुर वितरण ।
ट) स्रस्टाहरुको र्वािर्षक रुपमा सम्मान गरिन्थ्यो ।
ठ) सिंचाई , नदि नियन्त्रण खेल मैदान निर्माणको अवधारणा त्यसै बेला सुरु गरिन्थ्यो ।
ड) युवाहरुलाई खेल सामाग्री वितरण जस्ता कार्यहरु समावेशी र सन्तुलित ढंगबाट गरिएको थियो । माथि उल्लेख गरिए लगाएत अन्य कार्यहरु पाँच वर्षमा जम्मा पौने चार करोड को बजेट ले सम्मान गरिएको थियो ।
१०.अन्त्यमा पव्लिक आवाज मार्फत आम नागरिकलाई के भन्न चाहानुहुन्छ ?
देशकै चर्चित अनलाईन बिकास टाईम्स टिमलाई धन्यवाद दिन चाहान्छु । मेरो आवाजलाई जनता माझ पु¥याउने जुन मौका दिनु भयो फेरी धन्यवाद भन्न चाहान्छु । वालिङ लगायत जिल्लाको समग्र विकासका लागि सबै नागरिकले चनाखो साथ अगाडी बढ्न आग्रह गर्छु ।
म एउटा राजनीतिक प्राणी भएको नाताले जिल्लाको काँग्रेसलाई बलियो बनाउन पुराना नेताको सम्मान गर्दै खोजी गर्ने परिपाटी बसाल्न पनि आग्रह गर्न चाहान्छु । राम्रालाई भन्दा आफ्नालाई मात्रै खोज्ने विकासको अन्त्य गरौ । यसैमा सबैको भलो हुने छ ।